काँग्रेसभित्रको झ’गडा चुलिँदै ; शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबिच सार्वजनिक कार्यक्रममै भयो यस्तो भना’भन : – Sadhaiko Khabar
काँग्रेसभित्रको झ’गडा चुलिँदै ; शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबिच सार्वजनिक कार्यक्रममै भयो यस्तो भना’भन :
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २८, २०७७ समय: ७:०४:११
काठमाडौं/ नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भना’भन भएको छ । कार्यक्रममा नै नेता पौडेलले नयाँ सरकार गठनको अवसर खेर फालेको भन्दै आ’क्रोश पोखेपछि सभापति देउवाले मैले कहाँ कस्तो अवसर खेर फालें? भन्दै पौडेललाई प्रति’प्रश्न गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेता पौडेलले जोखाना हेर्दाहेर्दै सरकार गठनको एउटा अवसर गुमेकोमा देउवाको आलो’चना गर्दै अब अर्को अवसर खेर फाल्न नहुने आवश्यकता औंंल्याए । पौडेलले बोलेपछि अन्तिममा बोलेका सभापति देउवाले पौडेलतर्फ संकेत गर्दै आफूले कुनै अवसर खेर नफालेको स्पष्ट पारे । ‘मैले केमा अवसर खेर फालें ?’ देउवाले प्रश्न गर्दै भने ।
यसअघि सभामा नै पौडेल र देउवाबीच सामान्य भना’भन भएको थियो । त्यसमा उपसभापति विमलेन्द्र निधीले देउवालाई साथ दिएको कार्यक्रममा सहभागी एक कर्मचारीले बताए । निधीले सभापति देउवाकै शैलीमा नयाँ सरकार गठनका लागि संसदमा संख्या पुग्नु परेन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । यो खबर आ’जको राजधानी दैनि’कमा छ ।